Indima Yokwaziswa Kwezingcingo Ebhizinisi - Iseluleko Se-Semalt
. Kuyinto ubuchwepheshe obhekwe kakhulu ukuzenzelela ukukhishwa kwemininingwane yewebhu engahleliwe nokuyiguqulela ibe ifomethi ephathekayo. Idatha yokubamba iqhaza kuhilela ukuhamba nge-URL usebenzisa i-robot bese usebenzisa i-XPath, i-CSS, i-REGEX noma enye inqubo efanele ukukhipha ulwazi olufunayo kusuka kukhasi lewebhu. Ngakho-ke, inikeza indlela yokuqoqa ulwazi ngokuzenzekelayo kusuka kuwebhu.
Okwamanje, kunamakhemikhali amaningi okukhipha idatha - okuvela kwizixazululo ezizenzekelayo ezikwazi ukuguqula wonke amasayithi abe nolwazi oluhlelekile kumahlelo ad-hoc adinga umzamo womuntu - faretti su cavo e binario.
Ukukhwa kwedatha kunezinhlelo ezingenakubalwa. Nazi izindlela ezisetshenziswa kakhulu ukukhwabanisa iwebhu ebhizinisini:
1. Ukulandela ukutholakala kwe-intanethi
Esinye sezici ezibalulekile zokuqamba kwedatha ukuthi ingasetshenziselwa ukukhwabanisa amaphrofayela ebhizinisi kanye nokubuyekezwa kumawebhusayithi. Ulwazi olutholiwe lungasiza ekuhloleni ukusebenza komkhiqizo, ukusabela komsebenzisi, nokuziphatha, njll. I-web scraping ingahlunga futhi ihlole amashumi ezinkulungwane zamaphrofayli womsebenzisi kanye nokubuyekezwa kwabo okungasiza kakhulu ekuhlaziyeni kwebhizinisi.
2. Ukukhipha umkhiqizo nemininingwane yentengo yamasayithi okuqhathanisa
Kunezinhlayiya zewebhu eziqondene nendawo ezishaya futhi zishaye izintengo zomkhiqizo, izincazelo, nezithombe ukuthola idatha yokuqhathanisa noma ukuhlanganyela. Idatha etholakalayo ngamanani ingasiza ekusetshenzisweni kwentengo, okuye kwafakazelwa ekuthuthukiseni izinzuzo zamanani ngamaphesenti amakhulu. Amabhizinisi embonini ye-e-commerce angawasebenzisa ngokunenzuzo amathuluzi atholakalayo wedatha atholakalayo ukuqinisekisa ukuthi anika amanani amahle ngaso sonke isikhathi.
3. Ukuhlaziywa kwamakhasimende nokuhleleka
Lokhu kwenziwa kakhulu ngamashaneli / amawebhusayithi amasha ukuqonda izilaleli zabo. Idatha ekhishweyo ingasetshenziswa ukwazi ukuziphatha kwezilaleli. Ukuze isiteshi, lokhu kungasiza ekuhlinzekeni izindaba ezihlosiwe kubabukeli. Okubukela kuyi-intanethi, isibonelo, unikeza iphethini yokuziphatha engayisebenzisa ukuthi ukwazi ukuthi uyithandani ngempela.
4. Ukuphatha idumela le-intanethi
Namuhla, izinkampani zisebenzisa imali yezigidi ekulondolozeni ubukhona obukhulu be-intanethi, futhi ukubhula iwebhu kuseyindlela yamasu ebaluleke kakhulu kule njongo. Idatha eqoshiwe ingatshela kabanzi mayelana nesu lakho lokuphatha idumela lakho ku-intanethi ngoba likusiza ukuthi uqonde izethameli othemba ukuthi uzothinta kanye nezindawo ezingalimaza idumela lakho. Nge-crawler enokwethenjelwa yewebhu, ungakwazi ukuveza kalula abaholi benombono, imizwa ematheksthini, izihloko ezihamba phambili, kanye nezici zabantu ezifana nobudala nobulili. Ungasebenzisa lolu lwazi ngenzuzo yakho.
5. Ukuthola izibuyekezo zokukhwabanisa
I-Opinion i-spamming , noma ukubhalwa kwemibono nemibono ekhohlisayo ukudukisa abafundi sekuye kwaba ukukhathazeka okukhulu ngabantu abaxhomeke ekubuyekezweni kwemibono nemibono ngezinhloso ezehlukene. I-Web scraping ingaba usizo ekukhaleni izibuyekezo ezibhaliwe, ukuqinisekisa okuyiqiniso, nokubona nokuvimbela abaphangi.
Ngesikhathi samanje kwedatha enkulu futhi ukwanda komncintiswano, ukusetshenziswa kwe-data scraping akupheli. Ibhizinisi lakho lingathola okungenani indawo eyodwa lapho idatha yewebhu ingafakwa ekusetshenzisweni okuzuzisa. Ngakho-ke ukwaziswa kwedatha kuyingxenye ebalulekile yebhizinisi lekhulu le-21.